समूह बी र सीबाट को–को पुग्लान् नकआट चरण ? | सबै खेल
समूह बी र सीबाट को–को पुग्लान् नकआट चरण ?
७ असार २०७८, सोमबार १८:२४
१६औं संस्करणको युरोकपमा अहिले समूह चरणका अन्तिम चरणका खेल सुरु भएका छन् । आइतबारबाट सुरु भएको तेस्रो चरणअन्तर्गत सोमबार सामूह बी र सीका ४ खेल हुँदै छन् ।
समूह सीका दुई खेल युक्रेन र अस्ट्रिया तथा नेदरल्यान्ड्स र नर्थ मेसेडोनिया भिड्दै छन् । यस्तै समूह बीका दुई खेलमा रुस र डेनमार्क तथा बेल्जियम र स्कटल्यान्ड भिड्ने छन् । समूह सीको खेल राति ९ः४५ मा सुरु हुने छ भने समूह बीका खेल राति १२ः४५मा सुरु हुने छ।
समूह बी : दोस्रो हुन तीन टिमको प्रतिस्पर्धा
यो समूहमा फिफा बरियताको शीर्ष स्थानको बेल्ज्यिमसँगै नवप्रवेशी फिनल्यान्ड, रुस र डेनमार्क छन् । अन्तिम खेलअघि नै बेल्जियमले नकआउट चरणमा स्थान पक्का गरिसकेको छ। दोस्रो स्थानमा रहँदै नकआउट चरण पुग्न तीन टिम रुस, फिनल्यान्ड र डेनमार्क छन् । समूहमा दुवै खेल जितेको बेल्जियमको ६ अंक छ भने एक–एक जित निकालेका रुस र फिनल्यान्ड दोस्रो र तेस्रो स्थानमा छन् ।
नकआउट चरण दुवै खेलको नतिजाले फरक पार्ने भएका आजका दुवै खेल महत्वपूर्ण छन्। रुसले डेनमार्कसँग र फिनल्यान्डले बेल्जियमसँग खेल्ने छन्। यी खेलमा रुस विजयी भए ऊ दोस्रो हुँदै नकआट चरण पुग्ने छ । यस्तोमा फिनल्यान्ड विजयी भएपनि तेस्रो हुने छ, र चौथो स्थानको उत्कृष्ट ४ मा रहँदै ऊ पनि नकआट चरण पुग्ने छ। यता, डेनमार्क भने अकंबिहीन हुँदै बाहिरिने छ।
दुवै खेल बरारबीमा सकिए, रुस दोस्रो हुने छ, फिनल्यान्ड नकआउट चरण सम्भावना रहे पनि निश्चित भने हुने छैन । उ अन्य समूहका नतिजा पर्खनु पर्ने छ ।
फिनल्यान्डलाई दोस्रो हुँदै नकआट चरण पुग्न बेल्जियमलाई हराउनु पर्ने छ भने रुसले डेनमार्कसँग अंक गुमाउने पर्ने छ। अंकबिहीन भएपनि डेनमार्कको अघिल्लो चरण पुग्ने सम्भावना बाँकी नै छ। तर, त्यसका लागि उसले आफूले जितेर मात्र पुग्नै फिनल्यान्डको हारको कामना पनि गर्नुपर्ने छ भने अन्य समूहको नतिजा पनि कुर्नु पर्ने छ।
समूह बीमा बेल्जियमले रुसलाई ३–० र डेनमार्कलाई २–१ले हराएको थियो भने रुसले फिनल्यान्डलाई १–०ले हराउँदै फिनल्यान्डले डेनमार्कलाई १–०ले नै हराएको थियो।
समूह सी : नेदरल्यान्ड्स सुरक्षित, को बन्ला दोस्रो टिम युक्रेन या अस्ट्रिया ?
समूह सीको बलियो टिम नेदरल्यान्ड्सले एक खेल अगावै नेदरल्यान्ड्सले नकआउट चरणमा स्थान सुरक्षित गरिसकेको छ । यो समूहबाट नकआउट चरणमा पुग्ने दोस्रो टिमका लागि युक्रेन र अस्ट्रियाबीच प्रतिस्पर्धा छ ।
समूह सीमा ६ अंकसहित नेदरल्यान्ड्स शीर्ष स्थानमा रहँदा युक्रेन अस्ट्रियाको सामान ४ अंक छ र उनी क्रमशः दोस्रो र तस्रो स्थानमा छन् । पहिलो पटक युरोकप खेलिरहेको मेसेडोनिया भने अंक बिहीन छ, उ प्रतियोतिगाबाट बाहिरी सकेको छ।
युक्रेन र अस्ट्रिया बीचको खेलले समूह सीबाट नकआट चरण पुग्ने दोस्रो टिमको टुंगो लाग्ने छ। जित्ने टिम स्वतः दोस्रो हुँदै नकआउट चरण पुग्ने भने बराबरी भए गोल अन्तरका आधारमा युक्रेन दोस्रो हुँदै समूह चरणमा पुग्ने छ। यस्तो अवस्थामा अस्ट्रियाको पनि पाँच अंक नै हुने छ र उ पनि उत्कृष्ट चौथो हुँदै नकआट चरण पुग्ने छ ।
यो खेलको नतिजा जे भए पनि युक्रेन र अस्ट्रिया दुवैको नकआट चरण पुग्ने छन्। समूहमा चौथो हुने टिमको ४ अंक हुने भएकाले ऊ चौथो स्थाको उत्कृष्ट चारमा रहँदै नकआउट चरण पुग्न सक्ने छ।
यता, नेदरल्यान्ड्स र मेसेडोनियाबीचको खेल भने नकआउट समीकरणमा कुनै प्रभाव पार्ने छैन । यो खेलमा मेसोडोनिया विजयी भएपनि उलाई त्यो नकआउट चरण पु¥याउन पर्याप्त हुनेछैन ।
समूह सीमा नेदरल्यान्ड्सले युक्रेनलाई ३–२ र अस्ट्रियालाई २–०ले हराउँदा युक्रेनले मेसेडोनियालाई २–१ले र अस्ट्रियाले मेसेडोनियालाई ३–१ले हराएको थियो।
Tags: Austria, Euro cup 2020, Finland, Netherlands
नेपाली क्रिकेट टिमको जर्सी डिजाइन गर्दै ५ सय डिजानइनर
युक्रेनलाई हराउँदै अष्ट्रिया नकआउट चरणमा